iingcebiso zoqeqesho koovimba | Gcina A Isitimela
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Khawube nomfanekiso ehleli phantsi kunandipha ikofu yakho kusasa kwemithana izakhiwo yemveli Italian xa ufuna ukuphuma emanzini ehlwahlwazayo blue kunye neentaba eluhlaza emnandi. Nangona oku kuvakala ngathi nje iphupha, yinto yokwenene kwabo batyelela iLake Como emangalisayo. Oku kuhle…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Italy ngomnye zawo ezingqongileyo bamazwe ethandwa ehlabathini. Abantu umhlambi lizwe ukutya fantastic, isiko, kunye ubutyebi bembali. Inyaniso, akunalo ukuba atyelele kwizixeko ezinkulu ukuba ugonane Italy. Umzekelo olungileyo…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Yurophu uzele otyebileyo imbali kwaye iyantlukwano. Inyaniso, akukho mcimbi apho sihamba, uza mhlawumbi bona abali-elidlulileyo civilizations. Ngamaxesha athile, ezi iindawo ingaba uninhabited ruins. Kwelinye icala, ezi ndawo zinokuba ziindawo ezisindileyo kuvavanyo lwe…
Ixesha lokuFunda: 8 imizuzu Ukucinga ekwenzeni iintsuku ezimbalwa? Kuthekani izicwangciso ezinye uhambo imini ukuba ahambe ngetreyini, eParis? oololiwe French ziyingxenye ukuzila, lula, kunye nendlela eco-friendly yokuhamba eFrance. Nge Gcina A Isitimela, Uyakwazi ukubhukisha kwimizuzu…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Ngubani na ungathanda ukulondoloza imali xa kunokwenzeka, ngakumbi ekuzonwabiseni? Ukuhamba okungaba isenzo ezibizayo, kodwa uthenge itikiti lakho ngololiwe ne Gcina A kuqeqesha izicwangciso ngoncedo lwethu, uyakwazi yehlisa iindleko. Gcina imali xa uhamba nala 10 amacebiso…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ukuhamba ukubona izinto yi ukhetho omkhulu - kodwa ukuba ufuna ukuba wonwabe? Kwityala, kukho imizi ne yasebusuku best, kunye nokufumana apho ngololiwe bangasukela. Kuba izilwanyana party, akukho nto kwaphela…